Ezempilo Archives - Isambane News
I-NICD ithe bangu-399 abantu abasha abasuleleke nge-Covid-19. Ngokudabukisayo, sekufe abanye abantu abayisishiyagalolunye emahoreni angama-24 kuye kwangama-48 edlule. IGauteng ihamba phambili…
UMnyango wezeMpilo ubike ukuthi kunomuntu wesibili okutholakale ukuthi une-Monkey Pox eNingizimu Afrika. UMnyango Wezempilo uthi kufanele kuqashwe njengoba iNingizimu Afrika…
Bangaphezu kuka-10,000 abantu abahaqwe yi-Covid-19 eNingizimu Afrika ngosuku olulodwa
Izinga le-Covid-19 positivity likhuphuke lafinyelela ku-25.3% ngoLwesithathu kanti kuqoshwe izifo ezintsha eziyi-10,017. Lokhu kuletha inani eliphelele lamacala aselabhorethri kumacala aqinisekisiwe…
UNgqongqoshe Wezempilo e-KZN ukhathazekile ngokunyuka kwesibalo sabantu abahaqwe yiCovid-19
UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkk Nomagugu Simelane, usezwakalise ukukhathazeka ngokunyuka kwesibalo sabantu abahaqwe yiCovid-19 esifundazweni. UMnyango kaSimelane uthe zingu-1,742 izehlakalo zeCovid-19…
Ezempilo Okufakiwe Ucansi nobudlelwano
Ubuhle nobubi bokusebenzisa amakhondomu | Funda kabanzi
Iwebhusayithi yeWebMD ithi Ezingxenyeni eziningi zomhlaba, amakhondomu angenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu zokuvimbela inzalo. Isetshenziselwa ukuvimbela ukukhulelwa kanye nezifo ezihlobene nokuba…
Izamfonyo azisadingeki ngaphandle,kusho uRamaphosa
Izamfonyo azisadingeki ngaphandle,kusho uRamaphosa UMengameli wakuleli uMnuz Cyril Ramaphosa namuhla ebusuku umemezele izinguquko uhulumeni azozenza uma sesiqediwe isimo se-Covid-19 sikazwelonke.…